I-China Tattoo Height Adjustable Ingalo emnyama yoPhumla yokuma kwemveliso kunye neFektri | MOLONG
Umgangatho ophezulu wokuphumla kwengalo yesikhumba.
Ukulungiswa ukusuka kumanqaku ama-3 ahlukeneyo.
Kulula ukuyiphatha -Iphathekayo
Ingena kwimeko yesuti!
Ixabiso elifanelekileyo - uKhuphiswano
Ehlala & esisigxina & Esitalini
Ukhetho olufanelekileyo lweTattoo Studio
Esi situlo somnwe we tattoo esinohlengahlengiso sinokuhlengahlengiswa ngaphandle kokususa naziphi na iinxalenye.
Iphedi yesifuba igcwele ngokupheleleyo ukuthuthuzela ngakumbi amadoda nabafazi.
Isihlalo, isihlalo sengalo, iphedi yesifuba kunye nesihlalo sentloko zilungelelaniswa ngokupheleleyo.
Udidi Umba: Tattoo Armrest
Isixhobo: Isinyithi + seFaksi
Umbala Wento: Mnyama
Ubungakanani bePad eMnyama: Imilinganiselo. 22 x 17 cm / 8.7 x 6.7 intshi
Ukuphakama okulungisekayo: Imilinganiselo. I-83-136 cm / 31.5-52.8 intshi
Izixhobo ze tattoo zobuchwephesha
Ungahlengahlengisa ukuphakama nendawo yokubamba iingalo kwiindawo ezahlukeneyo.
Uyilo lwe-ergonomic likuvumela ukuba ulungelelanise nakweyiphi na i-engile ukuze ulungele nawuphi na umsebenzi we tattoo.
Cofa iqhosha kwaye ulithambise ulibhekise ngapha nangapha kwi-angle oyifunayo. Ukuba ayisiyi-pivot okanye i-angle kuphela etsala phambili okanye ngasemva
Le armrest kulula ukuyiphatha xa uhamba kunye nemiboniso ye tattoo.
Ukophuka kube ziziqwenga ezi-3 kunye nobunzima bokukhanya kunye nenqwaba encinci
Le armrest nayo yomelele kwaye kulula ukuyicoca.
Ukulungelelaniswa ngokupheleleyo kunye nomsebenzi onzima
- Iphedi ethambileyo kunye nentofontofo yeengalo, imilenze okanye ukuphumla kweenyawo.
-Uyilo lwe-Ergonomic likuvumela ukuba ulungelelanise nakweyiphi na i-engile (ngaphezulu kwe-180 degree) ukuze ulungele nawuphi na umsebenzi we tattoo.
Ukuphakama okulungelelanisiweyo kwiimfuno ezahlukeneyo.
- Iphedi ethambileyo kunye nentofontofo yeengalo, imilenze okanye iinyawo zokuphumla, ikhulisa intuthuzelo yabathengi.
Ukuma kwetripod kubonelela ngokuzinzileyo nokungatyibiliki (Imilenze yentsimbi eneerabha eziphelileyo).
-Iyaphatheka kwaye iyasongeka, kulula ukuyigcina okanye ukuyiphatha.
【Ingcali rest Ukuphumla kweengalo zokuphumla kunye nokuphumla komlenze, iphedi ethambileyo kunye nokuqina ikunika intuthuzelo yeengalo, imilenze kunye neenyawo zokuphumla, yenza ukuba umvambo wakho usebenze ngakumbi.
Ukuphakama okulungisekayo】 Ukuphakama kunokuhlengahlengiswa ukusuka kwi-65cm ukuya kwi-125cm ukuhambelana neemfuno zakho ezahlukeneyo, kukunika kunye nabathengi bakho amava amahle. Umthamo wokuthwala owomeleleyo, indawo yokuma iingalo inokubonelela ngenkxaso eyoneleyo yabantu abanobunzima obahlukeneyo
【Inokuchazeka】 Olu phumlo lwengalo yomvambo luyafumaneka, kulula ukuligcina kwaye uliphathe, ligcina indawo yokugcina ngakumbi xa ungadingi isitendi seenyawo ezintathu. Iphedi ikuvumela ukuba uhlengahlengise ngaphezulu kwe-180 yeedigri engile kuwo nawuphi na umsebenzi we tattoo.
【Anti-Skid】 Imilenze yentsimbi enemilenze emithathu ngeerabha eziphela ibonelela ngokuzinza kumvambo, iAnti-skid ngaphandle kokukrwela phantsi, iyasebenza kwaye ihlala ixesha elide. Imveliso efanelekileyo ye tattoo yobungcali okanye igcisa lomvambo.
Inkonzo ye-One-On-One Ukuba unemibuzo malunga nezinto zethu, nceda unxibelelane nathi nge-imeyile. Siyavuya ukukunceda ukusombulula ingxaki. Inkonzo yabathengi engaqhelekanga yile nto siyenzayo!
Egqithileyo Umatshini weKingKong 3 weTattoo Cartridge
Okulandelayo: Ukulahlwa kwe-silicone eguqukayo yokubamba icartridge yokubamba (25pcs / ibhokisi)
Ukuphakama Adjustable steel Stainless Tattoo Ingalo Re ...